ဖုန်းပြောတဲ့အခါ ဦးနှောက်ကိုထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့ ဘယ်ဘက်နားရွက်ကို သုံးပေးသင့်သလဲ? – BaHuTuTa
ဖုန်းပြောတဲ့အခါ ဘယ်နားရွက်နဲ့နားထောင်လေ့ပြောလေ့ရှိပါသလဲ?အများစုကတော့ ဖုန်းလာရင်ကောက်ကိုင်လိုက်တယ်။ပြီးရင် ဖုန်းကိုင်တဲ့လက်နဲ့ပဲ ဖုန်းပြော၊ဖုန်းနားထောင်လိုက်တာများပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဖုန်းကနေပျံ့နှံ့နေတဲ့ရေဒီယိုဓာတ်ရောင်ခြည်ဟာ ဦးနှောက်ကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာသတိရလိုက်ပါ။ဒီတော့ ဘယ်ဘက်နားရွက်ကိုသုံးရင် ဦးနှောက်ကိုထိခိုက်မှုလျော့နည်းမလဲ?
လေ့လာချက်တစ်ခုအရ ဖုန်းပြောဖို့၊ဖုန်းနားထောင်ဖို့အကောင်းဆုံးနားဟာ ကိုယ်သုံးတဲ့ဖုန်းအမျိုးအစားပေါ်လည်းမူတည်ပါသေးတယ်တဲ့။iPhones နဲ့ Samsung Galaxy S7s ဖုန်းတွေဟာ ညာဘက်အခြမ်းက လုပ်ဆောင်မှုပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး LG G5s ဖုန်းတွေကတော့ဘယ်ဘက်ခြမ်းကပိုပြီးလုပ်ဆောင်မှုကောင်းပါတယ်။ဒီလိုလုပ်ဆောင်မှုကောင်းတဲ့ဘက်ခြမ်းနဲ့ နားထောင်တာက ရေဒီယိုဓာတ်ရောင်ခြည်သင့်မှုကြောင့်ဦးနှောက်ပိုင်းထိခိုက်မှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
နောက်ထပ်လေ့လာချက်တွေအရတော့…တကယ်လို့သင်က left brain thinker တစ်ယောက်ဆိုရင် ဖုန်းကိုညာဘက်လက်နဲ့ယူပြီးညာဘက်နားရွက်မှာနားထောင်တာက အကောင်းဆုံးပါလို့ Henry Ford Hospital က ကျွမ်းကျင်သူဆရာဝန်တွေက အကြံပေးထားကြပါတယ်။Right Brain Thinker ဆိုရင်တော့ ဖုန်းကိုဘယ်ဘက်လက်နဲ့ယူပြီးဘယ်ဘက်နားရွက်နဲ့နားထောင်တာက အကောင်းဆုံးပါ။ဒါက ဦးနှောက်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကို အနည်းငယ်လျော့နည်းစေပါတယ်တဲ့။
ဦးနှောက်ရဲ့စဉ်းစားတွေးတောမှုအသုံးနိုင်ဆုံးဘက်ခြမ်းနဲ့ ဖုန်းနားထောင်တဲ့အပိုင်းက ဆက်စပ်နေတာဖြစ်လို့ အခုလိုလေ့လာချက်တွေထွက်ရှိလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ left-brain နဲ့ right-brain ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က သင်ဟာ ကိစ္စတစ်ခုခုဆို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတွေးရတာကိုနှစ်သက်တယ်။အလုပ်ကို တိကျသေသပ်စွာစနစ်တကျလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင် သင်က Left-brain သမားပါ။ဒီထက်ပိုပြီး ဖန်တီးရတာတွေနှစ်သက်တယ်၊အနုပညာမျက်စိရှိတယ်။တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေအမြဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် Right-brain သမားပါ။
ဦးနှောက်ကိုမထိခိုက်အောင်ရှောင်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ ဖုန်းပြောတဲ့အခါ အမြဲတမ်းဖုန်းကိုနားနဲ့မထိထားဖို့ပါပဲ။ပြောချင်တာကတော့ Bluetooth ဖြစ်စေ၊နားကျပ်နဲ့ဖြစ်စေ ပြောတာက အကောင်းဆုံးပါ။နားနဲ့ဖုန်းနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့တဲ့အခါ ဦးနှောက်ကင်ဆာ၊လည်ပင်းကင်ဆာ၊ဦးခေါင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတော်တော်များများဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ဖုန်ုးပြောတဲ့အခါ အတတ်နိုင်ဆုံး ဖုန်းနဲ့နားနဲ့ မထိတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။